အိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဂျင်းအထည့် မခံရအောင် ဒါကိုဖတ်ပြီး သိမ်းထားပါ – WunYan
အိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ဂျင်းအထည့် မခံရအောင် ဒါကိုဖတ်ပြီး သိမ်းထားပါ
အိမ်မှာ ရေခဲသေတ္တာ တခုခုဖြစ်ရင် ဂျင်းအထည့်မခံရအောင် ဒါကိုဖတ်ပြီး သိမ်းထားပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ ၏ အတွင်း၊ အပြင် ကို ရေဖြင့် မည်သည့် အခါမှ ပက်ဖြန်းဆေးကြောခြင်း မပြုရ။ အတွင်း ၌ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ၊ ၀ိုင်ယာကြိုးများ တပ်ဆင်ထား သဖြင့် ရှော့ဖြစ်တတ်သည်။
၂။ မီးလောင်စေတတ်သော မှုတ်ဆေးဘူး၊ ဓါတ်ငွေ့ဘူးများ ကို ရေခဲသေတ္တာ အနီးတွင် မသုံး ပါနှင့်။ ရေ ခဲသေတ္တာ မှ အပူကြောင့် မီးလောင် တတ်သည်။
၃။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ကို အကြာကြီး ဖွင့် မထားပါနှင့်။
၄။ ပူနေသေးသော အစား အသောက် များကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း မထည့် ပါနှင့်။ အအေးခံပြီး မှ ထည့်ပါ။
၅။ ကာဘွန်နိတ် အအေးဗူး (ဥပမာ – ကိုကာကိုလာ၊ 100 Plus) စသည် တို့ကို အပေါ်ထပ် အအေးခန်း ထဲ မထည့် ပါနှင့်။
၆။ ဓါတုဗေဒဆေးရည် များ၊ ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ပါနှင့်။
၇။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ပစ္စည်းများ ကို ကြပ်သိပ်နေအောင် ထည့်မထား ပါနှင့်။ လေလှည့် ပတ် မှုကောင်းအောင် နေရာ လပ် ပေးထားပါ။
၈။ ရေခဲသေတ္တာ အပေါ်ထပ် ရေခဲခန်း အတွင်း ပုလင်း ၊ ဖန်ခွက် စသည် တို့ဖြင့် ထည့်ထားသော အရည် ပုလင်း များ မထည့်ပါနှင့်။ ကွဲတတ်သည်။
၉။ အေးခဲနေသော အသားငါး များနှင့် ယခု မှ ၀ယ်လာသော အသားငါး များကို အပေါ်ရေခဲခန်း အတွင်း အတူ ပူးကပ် မထားပါနှင့်။ ခွာထားပါ။
၁၀။ မီးလောင်စေတတ်သော ပစ္စည်းများ၊ မီးခြစ်၊ ဖယောင်းတိုင်၊ အီသာ၊ ဘင်ဇင်း၊ အယ်လ်ကိုဟော၊ ဓါတ်ငွေ့ မီးခြစ် တွင် ထည့်သော အရည် စသည်တို့ ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း မထည့်ပါနှင့်။ ပေါက်ကွဲ တတ်သည်။
၁၁။ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေးများ ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း မထည့် ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ထည့်ထား ပါ ဟု ညွှန်ကြားထား သည့် ဆေးများ ကိုသာ ထည့်ပါ။
၁၂။ လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများ ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ပါနှင့်။
၁၃။ ရေခဲခန်း အတွင်း မှ ခဲနေသော အသား ငါး များ ကို ထုတ်ကာ အရည်ပျော်စေပြီးနောက် ထပ်မံ ၍ ရေခဲ ခန်း အတွင်း မထည့် ပါတော့နှင့်။ အားလုံး ကုန်အောင်စားပါ။￼
ထို့ကြောင့် ရေခဲခန်း အတွင်း ထည့်မည့် အသား ငါး များကို တစ်ခါ ချက်လောက် ရုံ ခုတ်ထစ်၊ ရေဖြင့် သေသေ ချာ ချာဆေးပြီး မှ သိုလှောင်ပါ။ ထုတ်သည့် အခါ တွင်လည်း ထို တစ်ခါ ချက်လောက် ရုံသာ ထုတ်ပါ။ အခြား မချက်သေးသော အသား ငါး များကို အရည် မပျော်ပါစေနှင့်။ ဆက်လက် ခဲထားပါ။
၁၄။ အပူချိန် နိမ့်တွင် အလွယ် တကူ ပျက်စီးစေတတ်သော အသီး များ၊ ဥပမာ – ငှက်ပျောသီး၊ နာနတ်သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခွားသီး၊ စသည် တို့ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ထည့်သွင်း မသိုလှောင်ပါနှင့်။
၁၅။ ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်း အလုပ် မလုပ်တော့ ဟု ဆိုလျှင် ဆက် မသုံးပါနှင့်။ အတွင်းရှိ ပစ္စည်းများ အားလုံး ထုတ်ပါ။ ခလုတ်ကို ပိတ်ပြီး ပလပ် ကို ချွတ်ထားပါ။ ထို့နောက် ရေခဲသေတ္တာပြင်ဆိုင် သို့ ပို့ပါ။ အကယ်၍ မတော်တဆ ၀ိုင်ယာကြိုးပြတ် ၍ ပြင်လိုလျှင် နားလည် တတ်ကျွမ်းသူ ကိုသာ ပြန်ဆက်ခိုင်းပါ။ တတ်ယောင်ကား များကို ဆက်ခိုင်းခြင်း၊ မသိ နားမလည်ဘဲ မိမိ ကိုယ်တိုင် လုပ်ခြင်းသည် ဓါတ်လိုက် မည့် အန္တရာယ်ရော၊ မီးလောင်မည့် အန္တရာယ်ပါ ရှိပါသည်။
၁၆။ ရေခဲသေတ္တာ ကို (သယ်သည့် အခါ၊ နေရာပြောင်းသည့် အခါ များတွင်) မည်သည့် အခါမှ မလှဲ ပါနှင့်။ ထောင် လျှက်သာ ထားရပါမည်။
ရေခဲသေတ္တာ ကို မည်ကဲ့ သို့ ထိန်းသိမ်း ရမည်နည်း အပန်း မကြီး လှသော ထိန်းသိမ်းမှု အနည်းငယ်မျှ လုပ်လျှင်ပင် ရေခဲသေတ္တာ ၏ သက်တမ်း ကို ပိုပြီး ရှည်စေနိုင် သည်။ ထို့ပြင် ပျက်ချိန် မတိုင်မီ ပျက်မည့် အန္တရာယ်မှလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မည်။
အန္တရာယ် ကင်းရေး ပထမ (Safety First)
၁။ ရေခဲသေတ္တာ ကို သန့်ရှင်းရေး၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်တော့မည် ဆိုလျှင် ပထမဦး စွာ ပြုလုပ် ရမည် မှာ ရေခဲသေတ္တာ မီးခလုတ် ကို ပိတ်ကာ ပလပ်ချွတ် ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရေခဲသေတ္တာ ကို မီး မပိတ်ဘဲ၊ ပလပ် မချွတ်ဘဲ သန့်ရှင်းရေး၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး မလုပ်ပါနှင့်။ အလွန် အန္တရာယ် များသည်။
၂။ လေးလံသော၊ ကွဲနိုင်သော ပစ္စည်း များ ကို ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း မှ ထုတ်ပါ။
၃။ ရေခဲသေတ္တာ ကို မီးပိတ်၊ ပလပ်ချွတ်ပြီးလျှင် နံရံ မှ ခွာပါ။ ထိုသို့ ခွာရာ တွင် ရေခဲသေတ္တာ အောက်ပိုင်း ကိုသာ ကိုင်ပြီး ဖြေးညင်း စွာ ရွှေ့ပါ။ ကြမ်းပြင်များ ကို မခြစ်မိ စေရန် သတိထားပါ။
၄။ ရေခဲသေတ္တာ တစ်ပတ်လည် လူဝင် လို့ရနိုင်လောက်သည် ထိ ခွာထားပါ။
ရေခဲသေတ္တာ ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
ပုံမှန်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနေပါ မှ ရေခဲသေတ္တာ သက်တမ်းရှည် မည်။ အောက်ပါ အတိုင်း ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ အပြင် နံရံ များကို ရေနွေး အနည်းငယ် ဆွတ် ထားသော သန့်ရှင်း သည့် အ၀တ်ဖြင့် အနည်း ဆုံး တစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ် သုတ်ပေးပါ။ အကယ် ၍ အစွန်း အထင်း များ ကို သာမန် အ၀တ်စဖြင့် သုတ်မရ ပါက ဆပ်ပြာမှုံ့ အနည်းငယ် ထည့်သုံး နိုင်သည်။ အပြင်းစား ချေးချွတ်ဆေးများ သည် ရေခဲသေတ္တာ တွင် သုတ်ထားသော ဆေး များ ကို ထိခိုက်စေနိုင်၏။
၂။ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သည် ဆိုသော်လည်း ရေခဲသေတ္တာပေါ်သို့ ရေ များလောင်းချခြင်း မပြုလုပ်ပါနှင့်။ ဓါတ်လိုက် တတ်သည်။
၃။ တံခါး လက်ကိုင် များကို မူ သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့သော အ၀တ်စဖြင့် နေ့စဉ် သုတ်ပြီး သန့်ရှင်းပေးပါ။
၄။ တံခါးရွက် များတွင် လေလုံစေရန် ရာဘာပြား များ တပ်ဆင် ထားပါသည်။ ထို ရာဘာများ ကို မပေါက်ပြဲစေ ရန် ဂရုစိုက်ပါ။ ထို ရာဘာ များပေါ်တွင် ချေးညှော်များ ကပ်နေခြင်းသည် ရာဘာ၏ သက်တမ်း ကို ကျစေသည်။ ထို့ကြောင့် ထို ရာဘာ လိုင်နာ များကို မကြာခဏ စစ်ဆေးပြီး ချေးညှော် များကို သန့်ရှင်းပေး ပါ။
၅။ အတွင်းဘက် စင် များတွင် အစား အသောက်၊ အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်များမှ ကျသော အရည် များဖြင့် ညစ်ပတ်နေ တတ် ပါသည်။ ထို အရည်များပေနေ ခဲ့သော် အ၀တ်စ သန့်သန့် ကို ဆပ်ပြာရည် အနည်းငယ် ဆွတ်ကာ ချက်ခြင်း သန့်ရှင်းပေးပါ။
၆။ အကယ် ၍ အတွင်းဘက် စင်များပေါ်တွင် ဟင်းချက်ဆီ များ ပေကျံနေသော် ဆပ်ပြာနှင့် ချက်ခြင်း ဆေးကြော သန့်စင်ပါ။ ထို ဆီများကြောင့် ပလတ်စတစ် စင်များ ကွဲအက် ပျက်စီး တတ်သည်။
၇။ ရက်လွန်နေသော အစားအစာ များကို ဆက်ပြီး သိုလှောင် မထားပါနှင့်။ မစားဘဲ ချက်ခြင်း လွှင့်ပစ်ပါ။ ထို ပုပ်သိုးနေသော အစားအစာ များမှ တစ်ဆင့် ကောင်းသော အစား အသောက် များသို့ ကူးကာ နံစော်ပြီး ရောဂါ ရစေ တတ်သည်။
၈။ အကယ်၍ ရေခဲသေတ္တာ သည် Frost Free မဟုတ်လျှင် အပေါ်ထပ်ရေခဲခန်း ၌ ရေခဲ များ ကပ်တတ် သည်။ ရေခဲ များ ကပ်လာ ခဲ့သော် ရေခဲပြင် အထူ လက်မ၀က်ခန့် ရှိလာပြီ ဆိုသည်နှင့် ရေသေတ္တာ မီးကို ပိတ်၊ ပလပ်ကို ချွတ်ကာ အအေး ကိုလျှော့ ပါ။ ထို့နောက် ရေခဲ များပျော်အောင်စောင့်ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ရေခဲ အရည်ပျော်အောင် လုပ်ရာတွင် ရေနှင့်လောင်းခြင်း၊ အပူပေးခြင်း၊ ပန်ကာနှင့် မှုတ်ခြင်း၊ ဒါး စသော ချွန်ထက် သည့် အရာများဖြင့် ထိုးခွာခြင်း စသည်တို့ လုံးဝ မပြုလုပ်ပါနှင့်။ အီဗာပိုရေတာကွိုင် များ ပျက်စီးစေ တတ်သည်။ ရေခဲသေတ္တာ ခလုတ် ပိတ်လိုက်သည်နှင့် အအေးဓါတ်လျော့ကာ ရေခဲ များ သူ့ အလို လို အရည်ပျော် ကွာကျ ကုန်ပါမည်။
၉။ ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များ ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပါ။ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များ သည် ဖုံများ တက်နေကာ ညစ်ပတ်နေလျှင် အပူကို ကောင်းကောင်းစွန့် ထုတ်နိုင်မည် မဟုတ်။ ထိုအခါ ရေခဲသေတ္တာ အလုပ်ပို လုပ်ရမည်။ မီးအား ပိုကုန်ကျ မည်။ သက်တမ်း တိုမည်။
ထို့ကြောင့် ရေခဲသေတ္တာ ၏ ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များ ကို ပုံမှန် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးခြင်းသည် အရေးကြီး၏။
လွယ်ပါသည်။ ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များ ကို vacuum cleaner ရှိပါက vacuum cleaner ဖြင့် ဖုံ၊ အမှုံ များကို စုပ်ထုတ် ပါ။ vacuum cleaner မရှိဘူးလား။ လွယ်ပါသည်။ ကြက်မွေး တံမြက်စည်းဖြင့်သုတ်ပါ။ ကြက်မွေး တံမြက်စည်း မရှိလျှင် သန့်ရှင်းသော အ၀တ် စုတ်ဖြင့် သုတ်ပေးပါ။
ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များမှာ ပူနေမည်။ ထို့ကြောင့် လက် အပူလောင်မည်။ သတိထားပါ။ ဤကဲ့သို့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခြင်း ကို အနည်းဆုံး ၆ လ တစ်ကြိမ်၊ ၁ နှစ်တစ်ကြိမ် လုပ်ပေးပါ။ သို့သော် ဖုံထူသောဒေသ များ တွင် နှစ်လ တစ်ကြိမ်၊ သုံးလ တစ်ကြိမ် စသဖြင့် လုပ်ပေးသင့်ပါသည်။
ကွန်ဒင်ဆာ ကွိုင်များအောက်တွင် ချွေးခံခွက် (drip tray) ရှိတတ် ပါသည်။ ကွန်ဒင်ဆာ မှ ကျလာသောချွေးများ သည် ထိုခွက် အတွင်းတွင် စုနေမည်။ ထိုခွက် ကိုလည်း မကြာခဏ သွန်ပေးရန် လိုပါသည်။
ထိုခွက် အတွင်းရှိရေ တွင် ခြင်များပေါက်ဖွားနိုင် သည်။
ရေခဲသေတ္တာ ၏ မည်သည့်နေရာ တွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် ရှိသနည်း။ရေခဲသေတ္တာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည် ၍ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် မှာ ရေခဲသေတ္တာ ၏ နောက်ဘက်၊ သို့မဟုတ် အောက်ဘက် တွင် ရှိတတ်ပါသည်။ ထို့ပြင် အချို့ရေခဲသေတ္တာ များတွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် ကို အုပ် မထားသော်လည်း အချို့ ရေခဲသေတ္တာများ တွင် ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် များကို အုပ်ထား တတ်သည်။ အုပ်ထားလျှင် ထို အကာ များကို ဖြုတ်ရန် လိုပါသည်။
၁၀။ ပန်ကာ များကို သန့်ရှင်းပေးပါ။ကွန်ဒင်ဆာကွိုင်၊ သို့မဟုတ် အီဗာပိုရေတာ များကို လေမှုတ်ပေးသော ပန်ကာများ ရှိပါသည်။ ထို ပန်ကာများ တွင် ဖုံများ တက်နေ ပါမည်။ ကွန်ဒင်ဆာကွိုင် ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်သော အခါ ထို ပန်ကာများ ကိုပါ တစ်ပြိုင် နက် တည်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးပါ။
၁။ မီးပြတ် သွားသော်လည်း မူလ ရှိသော အအေးဓါတ်ဖြင့် ရေခဲသေတ္တာ အတွင်းတွင် ဆက်လက်အေးနေ မည်။ သို့သော် ထို အအေး ဓါတ်ကို ထိန်းထားနိုင်ရန် ရေခဲသေတ္တာ ဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်း ကို မကြာခဏ မပြု ပါနှင့်။ အအေးခန်း မှ အသား၊ ငါးများ ကိုလည်း သည် အတိုင်း ဆက်လက် ထားပါ။ သို့သော် ၂၄ နာရီ ထက်ကျော်ပြီး မီးပြတ်ပြီ ဆိုပါမူ အပေါ်ထပ် အအေးခန်း မှ အသားငါးများကို ထုတ်လိုက်ပါ။ သည်အတိုင်း ဆက် မထားပါနှင့်။ အအေးဓါတ်ပြယ်ပြီး ပုပ်ကုန် တတ်သည်။
၂။ ခရီးရက်ရှည် ထွက်တော့မည် ဆိုလျှင် ၃ ပတ် အတွင်း ပြန်ရောက်မည် ဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာ ကို မပိတ်ဘဲ သည်အတိုင်း ထားခဲ့ပါ။ သို့သော် အစား အသောက် များကို တော့ ကုန်အောင် သုံးခဲ့ပါ။၃ ပတ်ထက်ကျော်ပြီး နေမည် ဆိုပါက ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း ရှိသမျှ အစားအသောက် အားလုံးကို ထုတ် ပါ။ ရေခဲသေတ္တာ ကို သန့်ရှင်းပါ။ ခြောက်သွေ့အောင် လုပ်ပါ။ ထို့နောက် မီးပါ ပိတ်ပြီး ပလပ် ကို ချွတ်ထား လိုက်ပါ။
ဒါတွေ သိထားဘို့ လိုတယ်
၁။ ရေခဲသေတ္တာ နံရံများ ပူနေခြင်း သည် ပုံမှန်ဖြစ်၏။ စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။
၂။ မီးဖွင့် ထားပြီး ကွန်ပရက်ဆာ မောင်းနေလျှင် တုန်နေ၊ ပူနေ ပါမည်။ ဤသည်မှာ လည်း ပုံမှန်ဖြစ် သဖြင့် စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။
၃။ မီးပြတ်သွားပြီး မီးပြန် လာလျှင် ပုံမှန် အခြေ အနေပြန်ရောက်ရန် (ရေခဲသေတ္တာ လိုသည့် အပူချိန်ရောက်ရန်) ၉ နာရီ မှ ၁၄ နာရီ ခန့် ကြာပါ လိမ့်မည်။ ချက်ခြင်းပြန် မအေးလာ ခဲ့သော် စိတ်မပူ ပါနှင့်။ ရေခဲသေတ္တာ ကိုသာ တောက်လျှောက် ဖွင့်ထားပါ။
၄။ Frost Free သို့မဟုတ် Self-defrosting ဟုရေးထားသော ရေခဲသေတ္တာများ သည် အပေါ်ထပ် ၌ ခဲလာ မည့် ရေခဲ များကို ၆ နာရီ မှ ၈ နာရီ ကြာတိုင်း သူ့ဟာ သူ ပြန် အရည်ဖျော်ပေးသွား ပါလိမ့်မည်။ သီးသန့်ရေခဲဖျော်ပေးရန် မလိုပါ။
၅။ ယခုခေတ်ရေခဲသေတ္တာများ ၌ အနံ့ဖျောက်ပေး သည့် Platinum Deodorzing device ပါတတ် ပါသည်။ သို့သော် အပြင်ကကြည့်၍ မမြင် ရပါ။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း မှ အသား ငါး များ ၏ ညှီနံ့စသော မကောင်း သည့် အနံ့ အသက် များကို ဖျောက်ပေးပါသည်။
၆။ အကယ် ၍ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာနေ ခဲ့သော်၊ သို့မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင် တွင် အ၀တ်ရေစို များ လှန်းထား သော် ရေခဲသေတ္တာ နံရံ ၌ ချွေးပြန် တတ်ပါသည်။ ဤသည် မှာ ဖန်ခွက် အတွင်း ရေခဲ ထည့် ထားလျှင် ဖန်ခွက်နံရံ ၌ ချွေးပြန် သကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဤသည် မှာ ပုံမှန်ဖြစ်၍ စိတ်ပူစရာ မလိုပါ။
၇။ ရေခဲသေတ္တာအောက် တွင် အပေါ်ထပ်ရေခဲခန်း မှ ဖျော်ချ လိုက်သည့် ရေ သို့မဟုတ် ချွေး များကို ခံပေးသော ချွေးခံခွက် ရှိပါသည်။ ပုံမှန် အားဖြင့် ချွေးခံခွက် ကို ရေသွန် စရာမလိုပါ။ အငွေ့ပျံပြီး ရေများ ခန်း သွားပါလိမ့်မည်။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည့် အခါ ထိုခွက် ထဲ၌ မှိုများပေါက်လာ တတ်၊ အနံ့ အသက် များ ထွက်လာ တတ် ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ မဖြစ်အောင် ခွက် ကို ပုံမှန်ဆေးကြောပေးရန် လိုပါသည်။
၈။ ရေခဲ သည် ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှ အနံ့အသက် များကို စုပ်ယူနိုင်၏။ ထို့ကြောင့် ရေခဲခွက် များ နံနေတတ် ပါသည်။ ရေခဲခွက် များ အနံ့ အသက်ပျောက်အောင် ၂ လ တစ်ကြိမ်၊ ၃ လ တစ်ကြိမ် ဆေးကြောပေးပါ။
ရေခဲသေတ္တာ ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်ခြင်း
မှတ်ချက်။ ။ တံခါးရွက် တွင် လေလုံအောင် ထိန်းပေးသော ရာဘာလိုင်နာ ရှိသည်။ ထိုလိုင်နာ ကို မပေါက်ပြဲ၊ မပျက်စီးစေရန် အထူး သတိပြုပါ။ ထို လိုင်နာ ကွဲအက်၊ ပျက်စီးပါ က ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်းအေးတော့ မည် မဟုတ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာ လုံးဝ အလုပ် မလုပ်တော့လျှင် (မအေးတော့လျှင်) အောက်ပါ တို့ကို စစ်ဆေးပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ ပလပ် ကို သေသေ ချာချာ ထိုးထား ရဲ့လား? (ပလပ် မမိ တမိဖြစ်နေရင် သေသေ ချာချာ ပြန်ထိုးပါ။)
၂။ ရေခဲသေတ္တာ ရဲ့ မီးခလုတ် ဟာ ကောင်းသေး ရဲ့လား? (မီးခလုတ်ကောင်းမကောင်း ကို တခြား လျှပ်စစ် ပစ္စည်း တစ်ခုခု (ဥပမာ – မီးပူ၊ ဆံပင် အခြောက်ခံစက်) စတာတွေ သုံးပြီး စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မကောင်း ရင် ခလုတ်လဲပါ။)
၃။ ရေခဲသေတ္တာ မီးလိုင်း က breaker ကျနေ သလား။ Fuse (ဖျူ့စ်) ပြတ်နေ သလား? (Breaker ကျနေရင် ဘာကြောင့် ကျသလဲ အကြောင်းရင်း ကို ရှာပါ။ နောက်ပြန်တင်ပါ။
ဖျူ့စ်ပြတ်နေရင် တစ်နေရာရာ မှာရှော့ဖြစ်နေ သလား စစ်ဆေးပြီး အရွယ်တူ ဖျူ့စ်ကို ပြန်ဝယ် ထည့်ပါ။ ဖျူ့စ်ကို မူလ အရွယ်ထက် ပိုကြီး မထားပါနဲ့။ ရေခဲ သေတ္တာ ပျက်စီး တတ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ များ အတွက် fuse ဟာ ၁၃ အမ်ပီယာ (13A) ဖျူ့စ် ဖြစ်ပါတယ်။)
၄။ ရေခဲသေတ္တာ က ၀ိုင်ယာကြိုး ကို ကြွက်တွေ ကိုက်ဖြတ် ထားလို့ ပြတ်နေသလား? (၀ိုင်ယာကြိုးပြတ်တောက် ပျက်စီးနေရင် ကြိုး အသစ်နဲ့ အစား ထိုးပါ။ ပြန်ဆက်ပြီး မသုံးပါနဲ့။)
ရေခဲသေတ္တာ ကောင်းကောင်း မအေးတော့ လျှင် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း က အပူချိန်ထိန်း ခလုတ်ဟာ နံပါတ် (၁) ကိုရောက်နေ သလား? (ပုံမှန် ဆိုလျှင် ခလုတ် ကို နံပါတ် ၃ မှာ ထားပါတယ်။ နံပါတ် ၁ မှာ ဆို အေး မှာ မဟုတ်ပါ။ နံပါတ် ၃ သို့ပြန်ပြောင်းပါ။)
၂။ ရေခဲသေတ္တာ အနီး မှာ အပူ ထုတ်တဲ့ (မီးဖို၊ နေရောင် တိုက်ရိုက် ထိုးကျနေခြင်း) အရာတွေ ရှိနေသလား? (ရေခဲသေတ္တာ နားမှာ မီးဖို၊ မီးပူ စတာတွေ ရှိနေရင် ဝေးရာ ကို ရွှေ့ထား ပါ။ ရေခဲသေတ္တာ ကို နေထိုးနေ ရင် နေ မထိုးတဲ့နေရာ ကို ရွှေ့ပေးပါ။)
၃။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ကို သေသေချာချာ ပိတ်ထား ရဲ့လား။ တံခါး ဟနေသလား? (တံခါး မစေ့ရင် အအေးလျော့ ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါးကို ပိတ်တဲ့ အခါ သေသေချာချာ စေ့အောင် ပိတ်ဖို့ လိုပါတယ်။)
၄။ ရေခဲသေတ္တာ ရဲ့ တံခါး က ရာဘာ လိုင်နာတွေ ပေါက်ကွဲ ပျက်စီးနေသလား? (တံခါး က လိုင်နာတွေပေါက်ပြဲနေရင် အပြင်ကလေတွေ ၀င်နိုင် တာကြောင့် ကောင်းကောင်းအေးမှာ မဟုတ် ပါ။ ဆိုင်ပို့ပြီး လိုင်နာ အသစ်ပြန်ထည့်ပါ။)
၅။ ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ကို အကြာကြီး ဖွင့်ထား သလား? (ရေခဲသေတ္တာ တံခါး ကို ပစ္စည်းယူပြီး တာနဲ့ ချက်ခြင်းပြန်ပိတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကြာကြီး ဖွင့် မထားပါနဲ့။)
၆။ ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ ပူနေသေးတဲ့ အစား အစာတွေ ထည့်ထား သလား? (ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်ခင် အစားအသောက်တွေ ကို အရင် အအေး ခံပါ။ ပူနေတဲ့ အစား အသောက်တွေ ရေခဲသေတ္တာထဲ မထည့်ပါနဲ့။)
၇။ ရေခဲသေတ္တာထဲ မှာ ထည့်ထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေ အရမ်း များပြီး ကျပ်သိပ်နေသလား? (ရေခဲသေတ္တာ ထဲ ပစ္စည်းတွေ ထည့်တဲ့ အခါ စနစ်တကျ ထည့်ဘို့ လိုပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေ နဲ့ ကျပ်သိပ်နေ ရင် လေကောင်း ကောင်း မလှည့်ပတ်နိုင် လို့ ကောင်းကောင်းအေး မှာ မဟုတ်ပါ။)
၈။ ရေခဲသေတ္တာ ဟာ နံရံ နဲ့ သိပ်ကပ်နေ သလား? (ရေခဲသေတ္တာ ကို နံရံ ကနေ အနည်းဆုံး ၂ လက်မ ခွာထား ရပါမယ်။ နံရံ နဲ့ သိပ်ကပ် လွန်းနေရင် ဒါမှ မဟုတ် ရေခဲသေတ္တာ နဲ့ နံရံ အကြား မှာ ပစ္စည်းတွေ ထည့်ထားရင် လေ လှည့်ပတ်မှု မကောင်း လို့ အေးမှာ မဟုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာ နဲ့ နံရံ အကြားမှာ ဘာပစ္စည်း မှ မရှိပါစေနဲ့။
၉။ တကယ်လို့ Damper control ပါခဲ့ ရင် mid-position (အလယ်မှာ) ထားပေးပါ။ အောက်ထပ်ရေခဲသေတ္တာ ခန်း ထဲက အစားအသောက်တွေ အေးခဲနေလျှင် အောက်ပါတို့ ကို စစ်ဆေးပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ အတွင်း က အပူချိန်ထိန်း ခလုတ် ဟာ နံပါတ် (၅) ကိုရောက်နေသလား? (နံပါတ် ၅ ဟာ အမြင့်ဆုံး ခလုတ်ဖြစ် လို့ အရမ်းအေး ပါတယ်။ မလို အပ်ရင် နံပါတ် ၃ မှာပဲ ထားပါ။)
၂။ ရေခဲသေတ္တာထဲ မှာ စွတ်စိုနေ တဲ့ အစားအစာတွေ ထည့်ထား သလား? (အရမ်း စွတ်စိုနေ တဲ့ ဥပမာ – မျှစ်ချဉ်၊ ချဉ်ဖတ်၊ စိတ် ထားတဲ့ ဖရဲသီး စတာတွေဟာ ရေငွေ့ကို ထုတ်ပြီး တခြား အစားအသောက်တွေ ကို အေးခဲစေပါတယ်။ တကယ် လို့ ဖရဲသီး စိတ် ထည့်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီ အတိုင်း မထည့် ပါနဲ့။wrapping plastic ဆိုတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ပတ်တဲ့ ပလတ်စတ စ် အကြည်စ ပါးပါး ကလေး ရှိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပတ်ပြီးမှ ထည့်ပါ။)
ရေခဲသေတ္တာ သည် တုန်ခါနေလျှင်၊ အသံများ ထွက်နေလျှင် အောက်ပါတို့ကို စစ်ဆေးပါ။
၁။ ရေခဲသေတ္တာ ထားတဲ့ ကြမ်းပြင် ဟာ မညီညာ ဘဲ ခြေထောက် တစ်ဖက် လွတ်နေ သလား? (ပထမ – ရေခဲသေတ္တာ ထားတဲ့ ကြမ်းပြင် ဟာ ညီညာ တဲ့ ကြမ်းပြင်ဖြစ်ဖို့ လိုပါ တယ်။ နောက် ပြီး ရေခဲသေ တ္တာ ရဲ့ ခြေထောက် လေးချောင်း စလုံး ကြမ်းပြင်နဲ့ထိနေရပါမယ်။ ခြေထောက်တစ်ဖက် လွတ်နေရင် တစ်ခုခု နဲ့ ခုပေးပါ။)
၂။ ရေခဲသေတ္တာနောက်၊ အောက်ဘက် က ကွန်ပရက်ဆာ ဘက်မှာ တစ်ခုခု ၀င်နေသလား? (အကြောင်း တစ်စုံ တစ်ခုကြောင့် ကွန်ပရက်ဆာ ဘက်ကို သတ္တု ပစ္စည်းတစ်ခုခု ၀င်နေရင် အသံတွေမြည်နေ ပါမယ်။ အဲဒီ အခါ အဲဒီပစ္စည်း ကို ရှာပြီး ထုတ်ပစ်ပါ။)
၃။ ချွေးခံခွက် (drip tray) ချောင်နေရင် လဲ အသံ ထွက်တတ် ပါတယ်။ ပြန်ကျပ်ပေးပါ။
၄။ ရေခဲသေတ္တာနောက်၊ အောက်ဖက် မှာ ကာထား တဲ့ အကာတွေ ချောင်နေ သလား။ ပြန်ကျပ်ပေးပါ။